I-3 Edition ekhethekileyo-iSiseko soMvuzo
Ikhaya I-3 Special Edition
Wamkelekile kuHlelo lwethu lokuqala oluKhethekileyo
Njengonyango lwasehlotyeni, uMvuzo weSiseko unebhongo lokwazisa ngenkxaso yemidlalo yase-Edinburgh ye 'Isiphumo seCoolidge'.
Impembelelo yeCoolidge yiWonder Fools ngeli veki kwi-Traverse Theater e-Edinburgh
I-Foundation Foundation ivuyiswa ngokuba ngumxhasi womdlalo omtsha othabisayo obizwa ngokuba ngumdlalo I-Coolidge Impact The Wonder Fools. Siyakukhuthaza ukuba uze uze ubone. Iinkcukacha zemihla kunye neendawo ezingezantsi.
Kwi-2017, iifoto zoonografi zikhula ngezinga lokuzibonakalisa: e-UK kuphela, ii-7 zeeshoni zoononophelo zigidi zijongwa imihla ngemihla. Njengoko ukufikelela komntu kwiinkanuko zoononophala kwanda, ngokunjalo sinokungafuni ukuthetha ngawo. I-Coolidge Impact Ufuna ukuphula le tab.
Kwinqanaba lezinto ezenza i-intanethi ye-intanethi ibe yi-dollar yezigidigidi ze-dollar I-Coolidge Impact. Le ngqungquthela yemvelo, into ephosakeleyo kwisicwangciso sendalo, yenzelwe ukuba sifune 'amaqabane omtshato' kunye nomsebenzi wethu wokuchumisa kubonakala ukwenziwa. I sebenza ngo ukunyamezela ukwakha, okanye ukunyamezela, umntu ofanayo okanye umfutho onobubele obuncinane 'buvuza' ebuchosheni bokuqala. Ngexesha elide sinomnqweno omncinci nangaphantsi weqabane elifanayo lezesondo.
Ukugqithiselwa kwiintliwano-ndlebe kunye nabaxhasi be-porn, izilutha, iingcali zengqondo yengqondo, ootitshala bezonyango kunye nolwazi lwezonyango, ezi zizodwa kunye neengcamango zixelwa nge-4 ezilandelelanayo: uGeorge, umdlalo we-Gameboy ophethe iselula; UGary, ubaba ulahlekelwe yinkangala yakhe; Gail, umlimi onguvulindlela woononophelo kunye no-Retrospect, umlutha wesifo sangasese ofuna ukuba uqonde.
I-Coolidge Impact Usebenzisa indibaniselwano yokubalisa amabali, imibongo kunye nesayensi ukujonga ukuba iphonografi iyichaphazela njani impilo yethu yengqondo, ubudlelwane kunye namava ezesondo. Inkqubo ye- Wonder Fools, iqela elonwabisayo kunye neliyingqungquthela, liye laqonda le ntsuku yamhlanje kwaye yajika yaba ngumdlalo omtsha wokuzibandakanya kunye nomoya.
Umboniso wanikwa uKunconywa okuKhethekileyo njengenxalenye ye- "The Suitcase Prize" eNew Wolsey Theatre eIpswich kwiPULSE Festival ngo-2017. Ungababona kwezi ndawo zilandelayo:
I-Traverse Theater, e-Edinburgh: 20-22nd Septemba 2017
I-Tron Theatre, iGlasgow: 27-30 Septemba
I-Macroberts Arts Centre, I-Stirling: 20 Oktobha
I-New Diorama Theater, eLondon: 15 Novemba
Amatikiti kunye nolwazi: wonderfools.co.uk